IApartment yoLwandle lwaseBoho-uMgangatho ophantsi - I-Airbnb
IApartment yoLwandle lwaseBoho-uMgangatho ophantsi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMaria & Henri
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMaria & Henri iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yendawo! awukwazi ukusondela elunxwemeni kunolu! I-Prime ibekwe, i-quaint colonial beach front apartment yimpendulo. I-Boho Apartments iselunxwemeni ngokoqobo Lo mgangatho ophantsi wendlu unika iimbono ezimangalisayo phezu kweTofo bay kunye namanzi aluhlaza olwandle lwase-Indian, yiba nekofu yakho okanye ufunde incwadi kwiveranda ngelixa ufunxa i-Tofo's vibes. Ifumaneka kwimizuzu nje embalwa yokuhamba ukusuka kwimarike yaseTofo kufutshane ngokwaneleyo ukuze ufumane ukutya okumnandi kunye nesiselo, kodwa kude ngokwaneleyo ukubaleka i-buzz.
Le ndlu yekoloniyali esandula kuhlaziywa ibonelela ngendawo epholileyo kwaye etofotofo, ikhitshi evulekileyo / indawo yokuhlala, igumbi eli-1 elinesibini kunye neesofa ezimbini zokulala ezitofotofo kwindawo yokuhlala zonke zinenetha zeMozi kunye nabalandeli. Igumbi lokuhlambela labucala elinamanzi ashushu. Le ndlu ilala abantu aba-4. Isenokungakhululeki kwizibini ezi-2 ezifuna ubumfihlo, kodwa zilungele iintsapho ezinabantwana abancinci njengoko zikhuselekile kwaye zibonelela ngokuthe ngqo, ngokukhawuleza nangokulula ukufikelela kwicala elizolileyo leTofo bay. Unokwenza ixesha lentlanzi okanye i-prawns braai (i-BBQ), kunye neenyawo zakho entlabathi kwi-BBQ yangaphandle / indawo ye-braai ebonelelweyo okanye uphumle nje kwi-sun-bed uthatha iimbono ezimangalisayo uTofo kufuneka anikele.. yeyona nto iphambili kwiiholide zaselwandle. Ngokwenene ilitye elinqabileyo elincinane elashiywa ngamaxesha obukoloniyali adlulayo.....
Ukuhamba umgama ukuya kwimarike esembindini kunye neendawo zokutyela ezininzi kunye neebhari, kodwa buyela umva kude ngokwaneleyo ukubaleka iBuzz yeTofo's CBD;). Abamelwane bethu eCasa na Praia banendawo yokutyela ebonelela ngesidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa. Icala lethu elunxwemeni likhuselwe kakuhle kwimimoya exhaphakileyo kwaye linikeza indawo ezolileyo kakhulu ukuze ukonwabele ulwandle. Eli cala lonxweme likwayaziwa ngokusefa kwayo. Ukusefa apha akuqikelekanga, kodwa kunokubonelela ngeemeko zokusefa kumanqanaba amaninzi. Ilungele ixesha elide, elifutshane kunye nebhodi yokubheqa ngokufanayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria & Henri
Sihlala kufutshane, ngoko siya kufumaneka kulo naluphi na uncedo olufunekayo. Ukuba siphuma edolophini sinoMququzeleli wethu othembekileyo we-ANA.